Matanho ekukura kwekitsi, ivo vanokura kusvika zera ripi? | Noti Katsi
Makati madiki fimin ayo vanokura nekukurumidza zvakanyanya. Mugore rimwe chete vanorema vakatenderedza zana magiramu pavanoberekwa kusvika 100 kana 2kg gumi mwedzi gare gare. Asi pamusoro pezvo, vanoonekwa sevanhu vakuru kubva pamwedzi mitanhatu kana minomwe, nekuti pazera iro vanotanga kupisa uye, nekudaro, kana kusangana kuchikwira, katsi ichazvara vana vayo. Nemwedzi mitanhatu chete, hongu.
Asi kukura kwekitsi hakuregi mukati megore rekutanga, asi mugore rechipiri nerechitatu miviri yavo ichawedzera zvishoma, uye vanozowedzerawo huremu kukura kwavo kwoswedera kumagumo. Ziva danho rega rega richapfuura nemumwe wako uye unakirwe yega yega yekamera iri muruoko sezvo nguva ichipfuura nekukurumidza, uye ipapo iwe uchaona kuti bhora rako rebvudzi rave Mr. Katsi.
1 Matanho ehupenyu hwekati
1.1 Mwedzi wekutanga
1.2 Mwedzi wechipiri
1.3 Pakati pemwedzi wechitatu nechitanhatu
1.4 Kubva pamwedzi wechitanhatu kusvika pagore
1.5 Kubva mugore rekutanga kusvika kumatatu
1.6 Kubva pamakore matatu kusvika manomwe
1.7 Kubva nomwe kusvika gumi nembiri
1.8 Kubva pamakore gumi nemaviri
2 Makati mangani anokura?
3 Unotanga rinhi kuona nekunzwa katsi?
4 Chii chinonzi huremu hwekati?
Matanho ehupenyu hwekati
Pazasi isu tinodonongodza nhanho dzakasiyana dzekukura idzo katsi yako ichaona muhupenyu hwayo hwese. Mune yega yega isu tinotsanangudza shanduko dzinoitika mumuviri wavo uye maitiro kuitira kuti iwe uzive nguva dzese kuti katsi yako iri kukura sei.
Kittens dzinoberekwa bofu uye matsi. Ivo vanovimba naamai kuchengetedza tembiricha yavo yemuviri, kudya uye kuramba vakachena, sezvo achivabatsira kuzvisunungura. Pazera rekutanga iri ivo vanotoziva kunhuwa kwemate avo amai uye vanotungamirirwa nekunhuwa kuti vamutevere, kunyangwe zvisingazove kusvika pavhiki rechitatu rezera kuti pfungwa iyi ichave yakanyatsogadziriswa.
About mushure memavhiki maviri vanozovhura maziso avo, uye vachatanga kuongorora nharaunda yavo, asi vachidzedzereka, uye ndezvekuti kusvika mazuva gumi nemashanu havazokwanisi kufamba zvakanaka. Parizvino, vanoramba vari padyo naamai vasingazeze kuvadzivirira kune chero anodikanwa. Ndokusaka padanho iri zviri nani kuti, kana tichigara nembwa, hatimbofa takavasiya vari voga nekatsi.
Pamasvondo matatu kurumura kunogona kutanga, kuvapa chikafu chemumagaba (zvirinani kana zviri zvakasikwa). Zvakare Izera rakanaka kwavari kuti vadzidze kuzvinunura pacheyi, sezvavanogona kuzvisunungura. Unogona kuvadzidzisa nekuisa zvinyoro-nyoro mubhokisi remarara mushure mekudya kwese; nenzira iyi iwe uchaona kuti nekukurumidza sei iye achanzwisisa kuti apa ndipo paanofanirwa kuenda nguva dzese dzaanoda.
Nemavhiki mana ivo vanotanga kutamba pamwe chete, vachisvetukira pamusoro paamai uye vachiruma. Panguva ino vanodzidza kuti vanofanirwa dzora kusimba kwemeno akosezvavanogona dzimwe nguva kukuvadza.
Nemaziso anoshanda nenzeve, kugona kuchengetedza tembiricha yemuviri, uye nechishuwo chikuru chekuongorora zvese, danho rakakosha rinotanga: kushamwaridzana. Zvishoma nezvishoma amai vavo vanoregedza kuvayamwisa, saka makati anofanirwa kudzidza kuzvimiririra zvishoma. Saka nezera iri nguva ichave yasvika yekuti mhuka isangane nevanhu. Tichafanirwa kuvatora zvinyoro nyoro, uye nekuvapa caress uye kupuruzira kuitira kuti vatibatanidze nechimwe chinhu chakanaka (mudiwa), sezvo zvichitarisirwa kuti katsi idzi hadzityiswe nevanhu, asi zvakapesana.
Nemavhiki masere, vanogona kutorwa. Asi iwe unofanirwa kuziva kuti ivo vanoshanda chaizvo uye vanotamba kwazvo, chimwe chinhu icho fenicha yako ingangodaro isingade zvakanyanya. Kunyangwe kana iwe uine chakatsetseka mukati chinosvika, panofanirwa kuve pasina matambudziko.
Pakati pemwedzi wechitatu nechitanhatu
Pazera iri katsi "yatove" katsi. Unotova nezvose zvaunoda kugadzirira kuva munhu mukuru. Hazvidi amai kuti vararame, uye zvingangoita kuti iwe utange kuda kuenda kunze kwenyika, chimwe chinhu chatinongobvumidza iwe kana isu tine chokwadi chizere chekuti hauzove mune chero njodzi.
Vakadzi vanoenda kunopisa kwakatenderedza mwedzi mitanhatu. Kana iwe uchingoda shamwari, chipfuwo, chichava kupfuura zvinokurudzirwa spay kana neuter ivo (zvese murume nemukadzi) kutenderera zera iri. Kunyangwe ichigona kuitwa pakati pemwedzi mina ne4, chinhu chinonyanya kurairwa kumirira kusvika 6, kudzivirira matambudziko ebudiriro (kunyanya mune evarume). Uye zvakare, kana iwe ukamupa mvumo yekufamba famba, izvi zvinodzivirira katsi yako kuti isvike kumba nekukuvara kana, kana iri hadzi, ine kushamisika (nhumbu).
Kubva pamwedzi wechitanhatu kusvika pagore
Zvino hongu, iwe unotova nekati yevakuru. Vanogona kuita kunge vanorara zvakanyanya, asi iwe unofanirwa kuziva kuti vanofarira kutamba, kunyanya husiku. Hongu, imhuka dzemanheru, saka kana iwe uchida kurara kwako husiku iwe uchafanirwa tora mukana wenguva yaunomuka masikati kuti utambe naye uye "kumunetesa." Mumusika muchawana akawanda mhando dzekutambisa, kunge tambo, laser pointers, mhuka dzakazara ... Sarudza idzo dzaunofunga kuti dzichafarira zvakanyanya, uye unakirwe neyako yakanaka furry shamwari.
Kubva mugore rekutanga kusvika kumatatu
Panguva iyi katsi inopedzisa kukura uye ichatanga kuratidza maitiro evechidiki. Zvakajairika kuti mukati memakore aya Ita zvaunoda, asingateerere kunyangwe mirairo yatinomupa. Kunyangwe pahukuru hwavo, ivo vachiri vana vanofarira kutamba uye kukwezva kutariswa, chimwe chinhu chavanogaro ita, handiti?
Kubva pamakore matatu kusvika manomwe
Zvishoma nezvishoma tichaona kuti kati yedu haidi kutamba zvakanyanya sepakutanga. Anoshandisa nguva yakawanda akarara (nguva dza14: XNUMX masikati pazuva), uye maitiro ake inova yakawanda nzvimbo kana ichienderana. Muchokwadi, kubva kumazera aya zvakaoma (asi hazvigoneke) kwavari kuti vatambire katsi nyowani mundima yavo, iyo, nenzira, ndiyo imba yako.
Kubva nomwe kusvika gumi nembiri
Kubva pamakore manomwe, katsi inotanga kuchembera. Vanotowedzera kunyarara, kudzikama. Shamwari yako ichapedza nguva yakawanda ichizorora, uye kwete kunyanya kutamba. Ehe, icharamba ichidaro dzimwe nguva, asi sezvaunosvika padyo nemakore ekukura iwe hauchazovazve nechishuwo chakanyanya kubva kudzingirira matoyi.
Kubva pamakore gumi nemaviri
Mboro yako yasakara. Iwe unozoona kuti kudya kwake kunodzikira sei, uye kuti pfungwa dzake dzinodzikira. Inogona kugadzirwa dermatological shanduko, kukudziridza hyperthyroidism y nzara dzawo dzinogona kukura dzakanyanya nekuda kwekushandisa kushoma. Ivo vanopedza shoma nguva yekushambidzika, chimwe chinhu chisingatore nguva yakareba kuti vaone mune yavo bhachi, iyo inorasikirwa nekupenya kwayo.
Hupenyu hunotarisirwa hwekati inenge makore makumi maviri nemashanu. Asi zvisinei nekuti zvinosvika papi, kana ukazvipa hanya, kutarisisa uye pamusoro pezvose zvakanyanya rudo, anozova shamwari yako yepamwoyo.
Kuchengeta katsi yakare
Makati mangani anokura?
Anotora nguva yakareba sei katsi? Sezvataona, katsi imhara iyo ine kukura nekukurumidza. Mugore rimwe chete, mapfupa ako uye mhasuru zvinosvika pakukura. Izvi zvinoreva kuti iwe uchave wakagadzirira 'kuona nyika' kana, mune chiitiko chausingakwanise kubuda, kuti uve Katsi Ishe.
Hunhu hwake tichaona kuti zvichachinja, zvishoma nezvishoma. Chido chekutamba chichaenderera kuve chakakwira, asi nekufamba kwenguva, iye achazofarira chikamu chekuputira kwete zvinonakidza zvakadaro. Asi chenjera, izvi hazvireve kuti hatifanire kutamba naye, asi kungoti hatimuone achimhanya achitenderera nesimba rakawanda senge iye aive imbwanana.
Asi, kunyangwe paine chokwadi chekuti zvinokurudzirwa kuvapa chikafu (makokoreti) yekitsi dzevanhu vakuru kubva pagore rehupenyu, kukura kwayo hakusati kwapera zvakadaro. Kana mukati memwedzi yekutanga skeleton yayo ichikura, kubva mugore rechipiri tichaona kuti 'inotora muviri', kuti inowedzera. Ndipo apo mhasuru mass painopedza kukura. Uku kukura kunogona kugara zvakanyanya kana kushoma, zvinoenderana nesaizi yekupedzisira yemhuka uye rudzi, asi kazhinji inopera nemakore matatu.
Kubva ipapo zvichienda mberi, uye kubva pakuona kwangu, tichava nekatsi chaiye mukuru, munzira dzese.
Unotanga rinhi kuona nekunzwa katsi?
Muzhinji, tora pakati pe9 ne16 mazuva. Iko kugona kwekutanga kunzwa uye kuona kunoonekwa panenge panguva imwe chete. Kana tikatarisa pameso, pakutanga vanozoita bhuruu, asi nekufamba kwemazuva, vara ravo rekupedzisira rinotsanangurwa, iro rinogona kuve rakasvibira, rakasviba kana rakanyanya kuita yero zvinoenderana nemageneti avo.
Nzeve dzake, dzakabatanidzwa pakuzvarwa, dzave kuvhurika uye dzinotanga kubatsira kukiti. Kutenda kwavari, zvishoma nezvishoma pfungwa yekudzora inozotonga, sezvo iri mukati mezeve nzeve imwe neimwe.
Chii chinonzi huremu hwekati?
Kurema kwekati kuchawedzera paanokura. Naizvozvo, pazasi isu tinokuudza iwe kuti avhareji uremu chii:
Achangoberekwa: 100 magiramu
Vhiki yekutanga: 115-170 magiramu
2-3 mavhiki: 170-225 magiramu
4-5 mavhiki: 225-450 magiramu
2 mwedzi: 680-900 magiramu
3 mwedzi: 1,4 makirogiramu
4 mwedzi: 1,8 makirogiramu
6 mwedzi: 3 makirogiramu
Kubva pahafu yegore yehupenyu uye kusvika asvitsa mwedzi gumi nemaviri ekuberekwa, pakati pe100 ne150 gramu anowedzerwa anenge pamwedzi Asi pane katsi dzakawanda dzisingazopedze kukura kwadzo kusvika kwapera makore maviri, zvinova izvo kana vachinge vasvika pahuremu hwadzo hunosvika makirogiramu mana paavhareji.
Kuziva nhanho dzakasiyana dzekukura kwekiti kunogona kukubatsira zvakanyanya kuti unzwisise kukura kwayo. Saka tinotarisira kuti chinyorwa ichi chakabatsira iwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Kukura kwekatsi
Matias Amaru Valdivia Silva akadaro
Ruzivo rwakanaka kwazvo, chaiko zvese zvandaitsvaga, ini ndakangotora 3 kittens uye ini ndatova nehombe, angave makore matatu uye haana kunetseka nekitsi dziri pasi pemwedzi mitanhatu.
Pindura kuna Matías Amaru Valdivia Silva
Ndiri kufara kuti zvinobatsira kwauri, Matías 🙂.
Ndakashamisika nedingindira rekuti ivo vanopedzisa kukura pakati pemakore maviri ne2 ehupenyu. Makore matatu apfuura ndakatora katsi yaive yatove nemwedzi mishanu ekuberekwa. Yakanga iri bvudzi pfupi kusvika gore nehafu iyo iyo yakatanga kukura yakawanda mvere uye mane shumba ine iyo muhuro. Ndiri kugara mune inodziya mamiriro ekunze. 3 kusvika 3 C ndosaka asina kutsanangura kukura kwehuswa hwake kwandiri.
Ndine katsi rine mwedzi mishanu husiku ndakamurarisa mutransport yakavharwa uye zuva rinotevera ndinomuburitsa ndomutenderera achimhanya achitamba mumba yekutandarira, ndakapedza mwedzi naye ndiri pamba asi rimwe zuva ndakashanyirwa nedzimwe shamwari uye husiku Semazuva ese kutsvoda kwehafu ndisati ndarara asi kubvira husiku pandakamusunungura aive. Kutya uye kutya uye akandiruma zvine utsinye, iye hafu akatsvoda ndokutanga kuzunza musoro wake nekuita zvisinganzwisisike nemuromo wake, sekureva kweshamwari yangu, akawedzera kuti jongwe diki rinogona kupinda munzeve yake asi ini handina kuona Hapana akandiudzawo kuti sekufa kwakaita katsi, sezvo inokandira mazai, handina mari kusvika kupera kwemwedzi uye ndiri kunetseka zvakanyanya.Rutivi rwangu nekudya, kudya zvakanaka nekutamba asi handizive zvakaitika kubva zuva ratakashanyirwa nevavakidzani, kana zvakaitwa nemwanasikana weumwe wevavakidzani nekuti kubva ipapo ndamuwana ari kure zvishoma, ndokumbira undipindure nekukasira, ndatenda nekundipinda
Zvakanaka, chekutanga, hapana munhu, kana munhu kana katsi, anogona kufa nekuve netupukanana mukati nenzeve 🙂 Kune chikamu ichi, usazvidya moyo.
Izvo hongu, zvinogona kushatirisa zvinotyisa. Kunyangwe iwe usingaione, kana uine chaicho, ichave yakavanzwa munzeve yako yemukati.
Nhau dzakanaka ndedzekuti, kubva pane zvaunoverenga, zvinoita sekunge zvishoma nezvishoma ari kurarama hupenyu hwakajairika. Asi kana hunhu hwake hwachinja kubva musi iwoyo, mikana ndeyekuti mumwe munhu kana chimwe chinhu chakamuunzira dambudziko.
Ndinokurudzira kuti utaure neshamwari dzako, pamwe nevose vaive mumba mako, kuti uone kuti chii chingave chakaitika kwaari. Hazvina kujairika kuti kati ichinje maitiro ayo kubva kune rimwe zuva kuenda kune rinotevera. Chimwe chinhu chisingafadzi chinofanira kunge chakaitika kwaari.
Paola Acuna akadaro
Kutenda neruzivo, rwunonyanya kubatsira, ndinodawo kugovana ruzivo rwangu nekiti sezvo ini ndaigara ndichida kutora imwe, vakandipa diki, kwete vhiki mbiri dzakapfuura ikatiza, yechipiri yaive nehasha uye ivo Zvakandibira, nyaya ndeyekuti ndakafunga kutora katsi mbiri uye vakoma nevanhurume nevanhurume vakasiiwa mumba, uye ndinofara navo vakazvibata zvakanaka uye havapunyuke vanonzwa kufara pano uye kuraira kwangu hakusi kwekuti vanongotsvaga kutora kittens diki asi kuti Vakuruwo vanotenda zvikuru uye vanochinja zvakakwana kana ukavapa rudo rukuru nerudo, kana vakagamuchira makuru, havazozvidemba.
Pindura Paola Acuña
Kutenda nekutitaurira nyaya yako Paola.
Tinoda magumo anofadza 🙂
Mhoroi, ndauya kuchinyorwa ichi nekuti ndinonzwa kuti katsi yangu haikurumidze kumhanya, inodarika mwedzi miviri uye ini handioni kumberi kukuru. Handizive kana ndiri kukundikana nedhayeti yake.
Inorema zvakadii? Zvisinei, kana mudiki achidya zvakanaka uye achitungamira hupenyu hwakajairika, usazvidya moyo. Kune katsi dzinogara diki.
Mhoroi, hanzvadzi yangu ine makiti maviri ane mwedzi mishanu uye madiki, anorema anopfuura magiramu mazana mashanu kana magiramu mazana matanhatu uye handione kuti anokura zvakanyanya uye tiri kunetsekana
Wakavadzora here? Kana zvisiri, ndinokurudzira kuenda navo kun'anga kuti vakupe mushonga unobvisa makonye.
Kana vaine hutano hwakanaka, hapana chekutya nazvo. Kune katsi dzinogara diki.
Mhoro wakanaka uye akagashira katsi yemwedzi mumwe chete nhasi mwedzi wapfuura uye vhiki inorema 337 gramu handizive kana ichizorema kana zvakajairika, vacheche vake vadiki vakafa kamwe kamwe iyi katsi inodya pokito pokito nhasi x muenzaniso x mangwanani iye akadya Zvikafu zvishoma uye akaenda kunorara, ndinonetsekana, kana chinhu chakafanana chikaitika kwaari, ini ndaive ndakanyanya pane vatatu, asi pakupedzisira, haatambe zvakanyanya.
Kitsi ine hutano inofanirwa kuve yakasvibira ine dumbu rakatenderera; pasina kuwedzeredza, asi kana iwe ukagara kubva kumashure iwe unofanirwa kuona musana wako kumapendekete zvakanyanya kana kushoma yakatwasuka, uyezve makwikwi ako.
Kana iwe ukati iwe unomuona achisuruvara, uye uchifunga nezvekuti vanin'ina vake vashaya, ndinogona kukurudzira kuenda naye kuna vet nekukurumidza. Iwe unogona kunge uine hutumbu hwemukati (honye), uye kuti uzvibvise iwe uchazotora sirasi.
nayeli glz akadaro
Mhoro, chirevo chako chinonakidza kwazvo, ini ndichangobva kutora katsi, handimuregedze uye ndinotya kuti achaenda.
Ndomumisa sei kuti asaende?
Pindura kuna Nayeli glz
Unofanira kupedza nguva yakawanda naye: kutamba naye, kuva naye. Pamusoro pezvo, zvakakoshawo kuti vamuteme kana mwedzi mitanhatu kuti vamutadzise kuva nechido chekuenda kunotsvaga mumwe wake.
Mhoroi, katsi yangu yemwedzi mishanu yakabuda uye sezviri pachena yasiyiwa nekitsi 🙁 Vakatukwa vakadzoka vakaumburuka zvikuru. Mubvunzo ndewokuti, angaite nhumbu nemwedzi mishanu chete here? Uye kana zvirizvo, zvinogona here kutapurwa, kana ini ndinofanira kumirira?
Hongu. Unogona kuitora kuti ishandise izvozvi pasina matambudziko.
Ndakasimudza katsi rekare kubva mumugwagwa uye ndakairera nemabhodhoro uye ndichiipa kudziya, yakanaka kwazvo chena nemaziso ebhuruu uye muswe wakatsvukuruka wakamira. Anotamba chaizvo uye anoda kuenda kupatio, ndinogara munzvimbo ine dzimba, ndinomukandira dovi zvino vhiki ino ndanga ndichizomubaya jekiseni nekuisa xip, asi iri China rakasiya nguva dza11 uye ini handina kumuona futi, ndatsvaga kwakatenderedza kubvunza vavakidzani.
Mubvunzo wangu ndewokuti, katsi kadiki diki inogona kuenda here kana kuve mukati mekupisa ... handifunge kuti zvakaoma kuti idzoke.
pamwe munhu akazvitora, asi zvaive zvisina kugadzikana
Ine makore mangani? Pa5-6 vanowanzo kuda kubuda, dzimwe nguva kunyangwe pakutanga (pamwedzi mina nehafu kana zvakadaro).
Nezve mubvunzo wako, zvingangoita kuti iri padyo, yakavanzwa. Katsi hadziwanzo kuenda kure, kushoma kana dzichiri diki. Tarisa pasi pemota uye munzvimbo dzaangangodaro akawana kuti aone kana aine rombo rakanaka.
alex devia akadaro
Mhoroi, ndine katsi rine gore rimwe chete, uye mushure memwedzi mitatu kurasikirwa kwebvudzi rave dambudziko redu hombe rakanyanya zvekuti munogona kuita manhamba naro, munobvunza vet uye zvinoita sezviri zvakajairika, kwete zvedu, izvo is Tachinja chikafu chake kanokwana ka4 pagore, haachadi kudya, zvino anodya Mirringo, hatizive kana zvichimukodzera, vamwe vanoti istress, vamwe kushaya mavitamin, uye kare takamutengera chikafu chekutanga. , uye ndakaverenga kuti akangoerekana achinzwa ega, takaunza vana vaviri vane mwedzi miviri-yechirume neechikadzi vanin'ina vehama, anga asingakwanise kugovana navo, akatambura pfuti mugumbo rake diki uye tinotarisira kuti achapora nekukurumidza, ini kungoda kumuona achifara, akanaka, akadzikama, tinomuda zvakanyanya, ndinotarisira kugadzirisa dambudziko rebvudzi ndatenda !!!
Pindura kuna Alex Devia
Ndinokurudzira kumupa chikafu chisina chibage. Tarisa uone chinongedzo, uye kana iwe ukawana oatmeal, chibage, bhari, kana chero chimwe chibage, chirase.
Ini handikwanise kukuudza kana chiri chikafu kana chisiri icho chinoita kuti kati yako irasike bvudzi, nekuti pane zvikonzero zvinoverengeka zvinowira bvudzipano une rumwe ruzivo nezvazvo), uyezve handisi chiremba wemhuka. Asi kubva pane zvakaitika kwandiri ndinogona kukuudza kuti mhuka inodya yakadai sekatsi ndipo painodya chikafu chemhando yepamusoro, isina zviyo, ine bhachi rine hutano uye rinopenya.
Mhoroi, ndakagamuchira kittens mbiri, hama diki dzinenge mwedzi mina yapfuura, murume nemukadzi, musiyano muhukuru patakavatora wanga uri mudiki, vanga vaine mwedzi mina, asi izvozvi zvakawandisa, mukomana akakurisa uye musikana mudiki kwazvo., isu tine hanya, hatizive kana mukomana ari kukura zvakanyanya kana kana musikana asiri kukura
Pindura kuti ok
Katsi dzechirume dzinowanzove dzakakura kudarika dzevakadzi. Mukutaura hapana kana chinhu chekushushikana nacho kana vari vatano.